Semalt: WordPress थिम प्रकारहरू तपाईंलाई यसको बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दछ
सहि वर्डप्रेस थीम छनौट गर्नु सबैभन्दा गाह्रो विकल्प हो जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा ब्लगका लागि बनाउनुहुनेछ। WordPress विषयवस्तुहरूको एक उत्तम सुविधाहरू यो हो कि तपाईं आफ्नो साइटमा एक पेशेवर र विस्तारित लुक दिन सक्नुहुन्छ र वेबसाइट विकास वा डिजाइन गर्न कुनै विशेषज्ञताको आवश्यक पर्दैन। WordPress विषयवस्तुहरूले तपाईंको सामग्री पाठकहरूमा राम्रो छाप छोडिदिन्छ र तपाईंको वेब पृष्ठहरू रेन्डर गर्ने तरिका परिवर्तन गर्दछ। विषयवस्तुहरूले साइटहरू वा ब्लगहरूलाई साधारण क्लिकबाट फरक देखिन सक्छन्।
तपाईंको साइट वा ब्लगको समग्र रूप नियन्त्रणको साथसाथै, WordPress विषयवस्तुहरू एसईओमा महत्त्वपूर्ण वा प्रमुख भूमिका खेल्छन् (सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन)। SEO तपाईंको साइट वा ब्लगलाई अप्टिमाइज गर्ने वा बढाउने प्रक्रिया हो ताकि यो खोजी ईन्जिन नतिजा पृष्ठहरू (SERPs) मा राम्रोसँग मिल्दछ। गुगल, बिंग, र याहू महान विषयवस्तु को साथ वेबसाइट प्राथमिकता र खोजशब्द को एक विविधता को लागी। तपाईं सजिलै आफ्नो साइट मुद्रीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र हप्ताहरूमा जैविक यातायात ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ।
ओलिभर किंग, Semalt को एक अग्रणी विशेषज्ञ, रूपरेखा छ कि त्यहाँ तीन मुख्य प्रकारका WordPress थीमहरू छन्:
१. प्रीमियम WordPress थीम्स:
प्रीमियम वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू उच्च गुणवत्ताका हुन् र उत्तम लेखकहरू वा ठूला कम्पनीहरूद्वारा विकसित हुन्छन्। तपाईंले ती थिमहरू, उनीहरूको विजेटहरू, मेनूहरू, र सबै विकल्पहरूमा पहुँच गर्न केही भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। प्रीमियम थिमहरूले हामीलाई प्रति वेबसाइट $ 50 देखि $ 500 सम्मको लागत दिन्छ र इजाजतपत्र दिन्छ। तिनीहरूले वेबसाइटहरूमा निम्न सुविधाहरू प्रदान गर्दछ:
SEO सजिलो छ
उन्नत, महान र सबैभन्दा नयाँ वेब मापदण्डहरू लागू गर्नुहोस्
प्रीमियम थिम अत्यधिक अनुकूलित छन् र राम्रो प्रदर्शन गर्दछ
तिनीहरू नि: शुल्क विषयवस्तुहरू भन्दा बढी लचिलो छन् र प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण समर्थन प्रदान गर्दछ
२. नि: शुल्क वर्डप्रेस थिमहरू:
यो इन्टरनेटमा हजारौं नि: शुल्क वर्डप्रेस थिमहरू छन् भनेर उल्लेख गर्न सुरक्षित छ। उत्तम पक्ष यो हो कि तपाईंले थिमहरू पहुँच गर्न केहि पनि भुक्तान गर्न आवश्यक पर्दैन र तिनीहरूलाई तत्काल स्थापना र सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ। यी थिमहरू वर्डप्रेस थीम डाइरेक्टरीमा उपस्थित छन् र शेड, डिजाइन, र सजावट को एक किसिम मा आउँछ। नि: शुल्क विषयवस्तुहरूको एक प्रमुख डाउनसाइड भनेको त्यो हो कि तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटलाई राम्रो तरिकाले बढाउन मद्दत गर्न सक्दैन। व्यावसायिक विकासकर्ताहरूले विषयवस्तुहरू डिजाइन गरेका छन् र तिनीहरूलाई अनलाइन उपलब्ध गराउँदछन्, तर मात्र त्यहाँ केही विकल्पहरू छन् जसबाट फाइदा लिन सकिन्छ।
तपाइँको वेबसाइट, WordPress, SEO बाउन्स रेट, यसको प्रदर्शन, र तपाइँको ब्लगको एक्सटेंसिबिलिटीमा WordPress विषयवस्तुको महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुने भएकोले तपाइँले नि: शुल्क वर्डप्रेस थिमहरूमा प्रीमियम थिमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। यदि तपाईंसँग प्रीमियम थिमहरू किन्न पर्याप्त पैसा छैन भने, तपाईं २० को प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ बीस तेह्र वा बीस ट्वेल्भ, जुन दुई उत्तम नि: शुल्क वर्डप्रेस थिमहरू हुन्।
Custom. अनुकूलन WordPress थिमहरू:
अनुकूलन WordPress विषयवस्तुहरू उनीहरूको अनुपम र परिष्कृत दृश्यका लागि राम्ररी परिचित छन्। यी थिमहरूले तपाइँलाई अनलाइन स्टोरहरू पहुँच गर्न र उनीहरूको विशेष सुविधाहरू हुन आवश्यक गर्दछ। कस्टम थिमहरू पेशेवर साइटहरू वा ब्रान्डका लागि विकासकर्ताहरू र डिजाइनरहरू द्वारा भारी शुल्कको बिरूद्ध विकसित छन्। तिनीहरूले धेरै विकल्प र लचिलोपन प्रदान गर्दछन्, तर ती सुविधाहरू प्रयोगकर्ताहरूमा सीमित छन् जसले आफ्नो शुल्क तिरेको छ।
मुख्य डाउनसाइडहरू मध्ये एक कस्टम थिमहरू धेरै महँगो छ, skilled 600 देखि, ,,,०० सम्म चलिरहेको छ कसरी कुशल र प्रख्यात डिजाइनरको आधारमा। सब भन्दा राम्रा उदाहरणहरू हाउस अफ रोज कस्टम थिम र साइड इनकम कस्टम थिम हो।